Rooney Oo Sheegay Inuu Ku Qaladanaa Inuu Codsigii Ka Tagida Man United Ee Uu U Gudbiyay Madaxda Kooxda 2010 - jornalizem
Rooney Oo Sheegay Inuu Ku Qaladanaa Inuu Codsigii Ka Tagida Man United Ee Uu U Gudbiyay Madaxda Kooxda 2010
Weeraryahanka Manchester United Wayne Rooney ayaa qirtay in qaladkii ugu weynaa ee intii uu ciyaaraha ku jiry uu ahaa midkii uu ku codsaday in uu ka tago kooxda United labo sano ka hor.
Rooney ayaa soo saaray qoraal bishii September 2010kii kaasoo uu ku weydiiyey Red Devils awooda ay u leeyihiin inay ciyaaryahano waaweyn soo jiitaan waxana uu sheegay in uu doonayo inuu ka tago sababtoo kooxda ayuu ku eedeeyey inaysan la imaan karin waxyaalaha uu doonayo.
Hase yeeshee labo maalmood kadib ayuu ciyaaryahanka reer England waxa uu saxiixay heshiis shan sano ah oo uu kooxda kula sii joogayo.
Rooney ayaa ku sheegay shalaaytadiisa qoraal si taxane ah loo soo geliyo Daily Mirror oo ka sheekeynaya taariiq nololeedkiisa. Waxana uu xusay: ”Bishii September 2010 waxaa xanuuniga soo wajahay lugta, ciyaarta,dhaawacayga waxa walba oo igu wareegsan waxa ay ahaayeen wax xun.taasina wax ay ahayd markii aan sameeyey qaladkii ugu weynaa intii aan ku soo dhex jirey ciyaarta kubbada cagta.”
Weeraryahanka kooxda Man United Wayne Rooney ayaa hadda waxa uu ugaga maqan yahay kooxdiisa iyo xulka dalkiisa oo caawa ciyaaraya mid kamid ah kulamada isreebreebka koobka adduunka dhaawac ka soo gaaray lugta waxaana dhowaan su’aal laga keenay sida uu noqon karo mustaqbalkiisa. Rooney oo codsan jirey in la keeno laacibiin waaweyn kooxda ayaa hadda waxaa uu u muuqdaa mid booskiisa ku wayn kara laacibiinta kooxda lagu soo kordhiyey.